नेपालमा बसोबास गर्ने छन्त्याल जाति | Everest Times UK
नेपालमा बसोबास गर्ने छन्त्याल जाति
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार छन्त्याल जातिको जनसंख्या महिला ६ हजार ५ सय ६५ जना र पुरुष ५ हजार २ सय ४५ जना गरी जम्मा ११ हजार ८ सय १० जना रहेका छन् । २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जम्मा ९ हजार ८ सय १४ जना उल्लेख गरिएको थियो । यसरी हेर्दा १० वर्षमा १ हजार ९ सय ९६ जनाले बृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी थोरै जनसंख्या भएरै होला छन्त्याल जातिलाई नेपाल सरकारले सुविधा बञ्चित समूहमा सूचीकृत गरेको पनि ।
छन्त्याल जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र भनेको बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लाको आसपास क्षेत्र हो । त्यहाँबाट बसाई सरी हाल काठमाडौ, पोखरा र भैरहवातिर पनि बसोबास गर्न थालेको देखिन्छ । सोह्र थर भएका छन्त्याल जाति परापूर्व कालमा खानीमा काम गर्थे । खानीको श्रोत सकिदै गएपछि उनीहरु खानी वरिपरि नै घर बनाउने थालेका हुन भन्ने भनाईहरु रहेका छन् । किन भने उनीहरु बसेको गाउँको नाम प्राय खानी जोडिएको देखिन्छ । जस्तैः पाखाखानी र लामीडाखानी आदि । सम्पर्क र अरुसंग बोल्नु परेको बेलामा नेपाली भाषामा बोल्ने गर्दछ । छन्त्याल जातिले बोल्ने भाषा खाम भाषा हो । उनीहरुको जातिभत्र एकआपसमा कुराकानी गर्दा खाम भाषामै बोल्ने गर्दछ । प्राय छन्त्यालहरु गुचुमुचु घर बनाएर बस्ने गर्दछ । कतै–कतै मात्र छरिएर बस्ने यिनीहरु जंगलको आसपासमा बढी बस्न मन पराउछन् ।
जंगलको आसपास बसोबास गर्दा घाँस दाउरा पशुपालनमा सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ । त्यसैले उनीहरु पशुपालनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । जंगलको नजिक भएकै कारणले होला उनीहरु निगालाबाट मान्द्रो र डोको डालो बुन्ने बेच्ने काम गर्दछ । साथै जंगल प्रशस्त भएकाले उनीहरु भेडा र बाख्रापालन पनि त्यति कै रुपमा पाल्ने गर्ने गर्दछ ।
हिन्दु धर्म मान्ने छन्त्याल जाति दशै तिहार, तीज, कृष्णाष्टमी र माघे संक्रान्तिलाइृ चार्डका रुपमा मनाउने गर्दछ । उनीहरु यी चार्डहरुमा खुव रमाइलो गर्दछ । आफन्तहरुसंग खुशी साटासाट गर्दछ । छन्त्याल जातिको पुरुषहरु कोट, इष्टकोट, फेटा, दोचा र उनीको लापकोट लगाउछन् भने महिलाहरुले गुन्यू, चोलो, छिटको फरिया, लुंङगी र भाङग्रा आदि लाउने गरेको देखिन्छ ।
महिलाहरु गहनाको रुपमा नाकमा पूmली, मुन्द्री र कानमा मारवाडी, पोते र माला लाउने गर्दछ । छन्त्याल जाति बसोबास गरेको क्षेत्रमा अन्न त्यति राम्रो उत्पादन नहुने हुँनाले मिठो खानको लागि अभैm पनि चार्ड नै पर्खनु पर्छ भन्ने गर्दछ । उनीहरु ढिडो र सिस्नो खानाको रुपमा खाने गर्दछ ।
छन्त्याल जाति न्वारान, छेवर, छैठी विवाह र मृत्युलाई संस्कारको रुपमा मान्ने गर्दछ । उनीहरु बच्चाको छेवर जन्मेको तीनदेखि पाँच वर्ष बीचमा गरिदिन्छ । दाइजो दिने चलन कायमै रहेको छन्त्याल जातिमा मागी विवाह, प्रेम विवाह र लतार्ने विवाह गरी जम्मा तीन प्रकारले विवाह गर्ने चलन रहेको छ । तामाङ, मगर र गुरुङ जातिमा जस्तै छन्त्याल जातिमा पनि फुपु र मामाको छोराछोरी बीच विवाह गर्ने चलन देखिन्छ । विवाहपछि सासु र ससुरालाई रक्सी र
छन्त्याल जाति हिन्दु धर्म मान्ने भएकोले जन्मदेखि मृत्युसम्म हिन्दु धर्मको मूल्य मान्यता अनुसार सम्पन्न गर्ने गर्दछ । उनीहरुमा कसैको मृत्यु हुँदा लासलाई गाड्ने र जलाउने दुबै प्रक्रिया अपनाउँछन् । गाड्ने हुँदा खाडल खनेर अनि जलाउने हुँदा चिता बनाएर अन्त्येष्टि गर्ने चलन रहेको छ । तर विशेष गरी जलाउने नै गर्दछ । छन्त्याल जातिमा तेह्रौ दिनसम्म किरिया बारी शुद्ध हुने गर्दछ । किरिया बार्दा नुन खाने गर्दैनन् ।
२. लेखक प्राज्ञ इन्द्रबहादुर गुरुङ,काशीपरी गुरुङद्धारा प्रकाशित तमु (गुरुङ) साँस्कृतिक दिग्दर्शन–असोज २०६८
३. लेखकद्धय ताम्ला उक्याव र श्याम अधिकारी, श्री ५ को सरकार
(हाल नेपाल सरकार) स्थानीय विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति काठमाडौद्धारा प्रकाशित नेपालका जनजातिहरु बैशाख–२०५७
अर्को अंक जिरेल जातिबारे लेख प्रकाशन गरिनेछ ।